Kurambana mumatanho gumi - Law & More B.V. | Eindhoven, Amsterdam
Kurambana mumatanho gumi
Zvakaoma kusarudza kuti worambana here. Paunenge iwe wafunga kuti iyi ndiyo chete mhinduro, maitiro acho anotanga kunyatso. Zvinhu zvakawanda zvinoda kurongedzwa uye ichavewo nguva yakaoma yemanzwiro. Kuti tikubatsire iwe munzira yako, isu tinopa tariso yematanho ese aunofanirwa kutora panguva yekurambana.
Nhanho 1: Ziviso yekurambana
Zvakakosha kuti iwe utange waudza mumwe wako kuti unoda kurambana. Ichi chiziviso chinowanzozodaidzwa kunzi kurambana chiziviso. Kuchenjera kupa chiziviso ichi kune mumwe wako pachezvako. Zvingave zvakaoma sei, zvakanaka kutaura nezvazvo nemumwe. Nenzira iyi iwe unogona kutsanangura kuti sei wauya kune iyi sarudzo. Edza kusapa mhosva kune mumwe nemumwe. Icho uye chinoramba chiri chisarudzo chakaomera imi mose. Zvakakosha kuti iwe uedze kuchengetedza kutaurirana kwakanaka. Uyezve, zvakanaka kudzivirira kunetsana. Nenzira iyi, unogona kudzivirira kurambana kwako kuve kurwa kurambana.
Kana muchikwanisa kutaurirana zvakanaka, munogonawo kurambana pamwe chete. Izvo zvakakosha kuti iwe utsvage gweta kuti ikutungamire iwe munguva ino. Kana kutaurirana nemumwe wako kwakanaka, munogona kushandisa gweta rimwe pamwechete. Kana izvi zvisiri izvo, bato rega rega rinofanira kuhaya gweta rayo.
Nhanho 2: Kushevedza gweta / murevereri
Kurambana kunotaurwa nemutongi uye chete magweta anogona kuendesa chikumbiro chekurambana nedare. Kunyangwe iwe uchifanira kusarudza gweta kana murevereri zvinoenderana nenzira yaunoda kurambana nayo. Mukutaurirana, unosarudza kuperekedzwa negweta rimwe chete / murevereri. Kana iwe nemumwe wako mukashandisa gweta renyu, muchave pamativi akatarisana enzira. Muchiitiko ichocho, mafambiro acho achatora nguva yakareba uye opinza mari yakawanda.
Nhanho 3: Yakakosha data uye zvinyorwa
Kune kurambana, huwandu hweruzivo nezvewe, mumwe wako uye vana zvakakosha. Semuenzaniso, gwaro remuchato, zvitupa zvekuzvarwa zvevana, BRP inotorwa kubva kumaspala, zvinotorwa kubva mugwaro rekuchengetwa zviri pamutemo uye zvibvumirano zvepamberi pemuchato. Aya ndiwo akakosha edzidziso ako ega uye magwaro anodikanwa kutanga nzira dzekurambana. Kana mune ako chaiwo mamiriro magwaro kana ruzivo rwuchidikanwa, gweta rako rinokuzivisa iwe.
Nhanho 4: Assets uye zvikwereti
Izvo zvakakosha kuti iwe utore mepu zvese zvinhu uye zvikwereti zvako iwe nemumwe wako panguva yekurambana uye utore magwaro anotsigira. Semuenzaniso, unogona kufunga nezvegwaro remusoro wemba yako uye notarial mortgage deed. Magwaro anotevera ezvemari anogona zvakare kuve akakosha: inishuwarenzi yemari, mari yegore, mari, zvirevo zvebhangi (kubva kusevha uye maakaundi ebhengi) nemitero yemitero kubva kumakore apfuura. Uyezve, rondedzero yemhedzisiro yemumba inofanirwa kudhirowe umo iwe unoratidza uyo achagamuchira chii.
Nhanho 5: Kutsigira kwemwana / Partner rutsigiro
Zvichienderana nemamiriro ako ezvemari, rutsigiro rwemwana kana rwevakaroora pamwe runofanira kubhadharwa futi. Kuti uone izvi, iyo data yemari uye yakatemwa mari yemapato ese ari maviri inoda kuongororwa. Zvichienderana neiyi data, gweta rako / murevereri anogona kuita alimony kuverenga.
Nhanho 6: Pension
Kurambana kunogona zvakare kuve nemhedzisiro papenjeni yako. Kugona kuona izvo, magwaro anodikanwa kuratidza zvese mvumo yepenjeni yakawanikwa newe nemumwe wako. Shure kwaizvozvo, iwe nemumwe wako (ex) mudiwa munogona kuita gadziriro maererano nekugovaniswa kwepenjeni. Semuenzaniso, unogona kusarudza pakati peyakaenzana mutemo kana nzira yekutendeuka. Mari yako yepenjeni inogona kukubatsira kuita sarudzo kwayo.
Nhanho 7: Chirongwa chekurera vana
Kana iwe nemumwe wako (ex) mudiwa uinewo vana, unosungirwa kugadzira chirongwa chekurera vana pamwechete. Chirongwa chekurera vana chinoendeswa kudare pamwe nechikumbiro chekurambana. Mune ino hurongwa iwe uchaisa pasi zvibvumirano pamwechete nezve:
Maitiro aunogovanisa ekuchengeta uye ekurera mabasa;
nzira iyo yamunotaurirana nekutaurirana pamusoro pezviitiko zvakakosha zvevana uye nezve zviwanikwa zvevana vadiki;
mutengo wekuchengetwa uye kurerwa kwevana vadiki.
Izvo zvakakosha kuti vana vabatanidzwewo mukugadzira chirongwa chekurera vana. Gweta rako rinogona kunyora chirongwa chekurera iwe pamwe newe. Nenzira iyoyo iwe unogona kuve nechokwadi chekuti chirongwa chekurera vana chinosangana nezvose zvinodiwa padare.
Nhanho 8: Kunyora chikumbiro
Kana zvibvumirano zvese zvaitwa, gweta remubatanidzwa kana gweta remumwe wako richagadzirira chikumbiro chekurambana uye nekufaira kudare. Mukurambana kwakafanana, mumwe wacho achazopihwa nguva yekuti ataure nyaya yavo vozotongwa mudare. Kana iwe wakasarudza kurambana pamwe chete, gweta rako rinozopa chikumbiro uye, kazhinji, musangano wedare unenge usiri kudikanwa.
Nhanho 9: Kufambiswa kwemuromo
Panguva yekutongwa kwemuromo, mapato anofanirwa kuoneka pamwechete negweta ravo. Munguva yekunzwa kwekunzwa, mapato anopiwa mukana wekutaura nyaya yavo. Mutongi achawanawo mukana wekubvunza mibvunzo. Kana mutongi achifunga kuti ane ruzivo rwakakwana, achagumisa kunzwa uye oratidza kuti achatonga munguva ipi.
Nhanho 10: Sarudzo yekurambana
Kana mutongi ataura danho rekurambana, unogona kukwidza mukati memwedzi mitatu yechirevo kana iwe usingawirirane nesarudzo. Mushure memwedzi mitatu danho rinova risingachinjiki uye kurambana kunogona kunyoreswa mubhuku rezvematongerwo enyika. Ipapo chete ndipo pekupedzisira kurambana. Kana iwe usiri kuda kumirira iyo yemwedzi mitatu, iwe nemumwe wako munogona kusaina gwaro rekuregererwa iro gweta renyu richanyora. Gwaro iri rinoratidza kuti unobvumirana nechisarudzo chekurambana uye kuti hausi kukwidza nyaya. Iwe haufanire kumirira iyo yemwedzi mitatu uye unogona kubva wanyoresa mutemo wekurambana muCivil Registry.
Iwe unoda rubatsiro here nekurambana kwako kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvinoitika zvekurambana? Wobva wabata nyanzvi dzemagweta emhuri ku Law & More. At Law & More, isu tinonzwisisa kuti kurambana uye zviitiko zvinotevera zvinogona kukanganisa hupenyu hwako. Ndicho chikonzero nei tichitora nzira yedu pachedu. Magweta edu anogona zvakare kukubatsira iwe mune chero chiitiko. Magweta pa Law & More inyanzvi mune zvemutemo wega uye zvemhuri uye vanofara kukutungamira, pamwe pamwe nemumwe wako, nenzira yekurambana.
Next Kudzivirira rendi »
pashure «Kunyorera gwaro rebasa muNetherlands. Izvi ndozvamunofanirwa kuziva semugari weUK.